नेल्सन मन्डेलाको बाटो र नेपालका राष्ट्रपति | चितवन पोष्ट दैनिक
नेल्सन मन्डेलाको बाटो र नेपालका राष्ट्रपति
२०७१ फाल्गुन ११, सोमबार ०४:३० गते
माहिर भारतीय दार्शनिक सन्त कवीर दासले एक ठाउँमा भनेका छन्–
‘लिकैलिक हिँड्छ कायर
लिक छाड्दैन कपूत
शायर, सिंह र सपूत ।’
शायर अर्थात् कविले आफ्नो विषय आफैँ छान्ने हो अनि प्रस्तुतिको शैली आफैँले बनाउने हो, आफैँले छान्ने हो । सिंहले आफ्नो झून्डलाई नेतृत्व दिनुका साथै आफ्नो बाटो आफैँ बनाउँछ । त्यसैगरी, अनेक वीरभाव प्रकट गर्ने, गौरव र अस्मिता जोडिएका तथा सिर्जनात्मक क्षेत्रका सपूतले पनि आफू हिँड्ने बाटो आफैँ खन्ने हो । लुत्रे कान लगाएर अनि अरुका पछाडि लागेर आजसम्म संसारमा कोही पनि नाम कमाउने भएकै छैन । आफैँ कमाउने हो, आफ्नो सुनाम । अरुका बाटामा हिँड्नेको नाम संसारमा कहिल्यै पनि चल्तीमा आएको पाइँदैन ।
कि बनाउनेको नाम रहन्छ, कि बिगार्नेको । फरक त ‘कु’ र ‘सु’ को मात्रै हो । बाटो हिँड्नेको नाम अहिलेसम्म कहाँ पो रहेको छ र ? रहँदैन । पथमा पथिक त कति हिँड्छन् कति ? हिँड्नेको नाम लिने हो भने संसारमा कुन पथमा कति यात्री हिँड्छन्, के हेक्का ?
नेपाली क्रान्तिकारी कवि गोपालप्रसाद रिमाल भन्थे–
‘एक जुगमा एक दिन
एकसाथ ल्याउँछ ।’
जबजब समाजमा अँध्यारोले घर्लप्प छोपेर अन्यायको रजगज गराउँछ, अनि प्रकृतिले त्यसको प्रत्युत्तरमा एक महामानवको जन्म गराई उसैका विचार र व्यवहारबाट न्यायको ज्योति बाल्दछ । संसारका महान् मानवहरुले समय–समयमा भनेकै छन्– समय बलवान् हुन्छ । यो चिरनूतन हुन्छ । कहिल्यै पुनरूक्ति हुँदैन ।
हिजोको समय आज छैन । आजको समय भोलि हुँदैन । बाउ विगत हो भने छोरोलाई आगत मान्नुपर्छ । यो क्रम रिले दौडजसरी संसारमा घुमिरहेको छ । समयको टिकटिक उषाको आरम्भिक लालिमादेखि सभ्यताको भीमकाय अन्त्यसम्म त्यसैगरी नै टिकटिकाइरहने छ । समयलाई संसारका मसिहा, परमार्थी र महामानवहरुले सजिलै चिन्न सक्छन् । उसको नादलाई पक्रन सक्छन्, अनि सक्छन्, समयानुकूल उचित साहसिक निर्णय लिन ।
व्यक्तिले लिने त्यस्ता निर्णयमा कुसाग्र बुद्धिको अधिक मह¤व हुने गर्छ । जसले समयको रफ्तारलाई बुझ्न र चिन्न सक्छ, त्यसले मात्र आफूलाई इतिहासको सुनौलो पानामा अजरामर बनाएर आफ्नो नामांकित गराउन सक्छ । समयलाई उसको गतिअनुसार चिन्ने र बुझ्ने मानिस नै महामानव हुन् । संसारको इतिहासलाई गम्भीर पठन गरेर विश्लेषण गरेको खण्डमा हामी यही कुरा थाहा पाउन सक्छौँ । इतिहासमा आएका र गएका राजा तथा महाराजाहरुको यात्रा, सत्तारोहण र जीवनलाई हेर्दा सोही कुराको जानकारी समस्त लोकलाई हुने गर्छ । त्यागका लागि कसैले कसैलाई अनुनय–विनय गर्दैन । स्वतःस्फूर्त रुपमा व्यक्तिले नै समयको आँकलन औ मापन गरी आफूमा भएको भावनात्मकताले देश, समाज र जनताको समूल भलाइका लागि त्याग्न सक्नुपर्छ ।
सिद्धार्थ गौतमले समयलाई चिनेर घरपरिवार, दरबार अनि राजपाठ सबै भएभरको ठूलो भनिएको कुरा त्यागे । भनिन्छ– जसले अरुको भलाइका लागि आँखाबाट आँसु चुहाउँछ, त्यस्ताको मृत्युमा आममानिसले आफ्ना आँखाबाट आँसु चुहाएर श्रद्धा प्रकट गर्छन् । अहिलेको सन्दर्भ, दक्षिण अफ्रिकाका भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा विश्वकै महानतम् नेता नेल्सन मन्डेलाको मृत्युको हो । ‘फूलको बासना डाँडावारि, मान्छेको बासना डाँडापारि’ भन्ने आहानै चलेको छ । मन्डेलाको मृत्युमा भावावेशमा नआउने संसारकै कोही पनि मानिस थिएनन् । उनको जीवनीलाई अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उनले आफ्नो क्रान्ति र परिवर्तनको जिम्मेवारी पूरा भैसकेपछि एक कार्यकाल बिताएर राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पद केही कुराको लोभ नगरीकनै सरक्कै त्यागे ।
संसारमा तीन प्रकारका मानिसहरु हुन्छन्– स्वार्थी, परार्थी र परमार्थी । आफ्नो दुनो सोझ्याएर म, मेरा र मेरी भन्दै सामान्य गोरखधन्दामा रमाउने मानिस स्वार्थी हो । संसारका जनसामान्य मानिसहरु प्रायःजसो स्वार्थी हुन्छन् र भएका पनि छन् । तिनीहरुको जन्मको खुसीलाई न लोकले मान्दछ, न मृत्युको शोकलाई जान्दछ । दोस्रो प्रकारमा परार्थी मानवहरु पर्दछन् । महाकवि देवकोटा परार्थी मानवमा पर्दथे । अहिले पनि निस्वार्थ समाजसेवामा लागेर आफूलाई नभइनभई समाजका गरिब तथा गुरूवालाई चौबिसै घन्टा सेवा–सत्कार गर्ने मानवहरु परार्थी हुन् । तेस्रो र अन्तिम वर्गका मानिसहरु परमार्थी हुन्छन् । यस्ता मानिसलाई जय–पराजयको हेक्का र लोभको देवलले किमार्थ पनि घेरेको हुँदैन । तिनीहरु त एक प्रकारको आनन्दलाई परसेवाको भावमा मिसाएर परमानन्दको भावमा रमाइ सारा संसारको भलो गर्ने काममा लागेका हुन्छन् । यिनीहरु आफू, आफन्त, बाउआमा, पत्नी, छोराछोरी केही पनि भन्दैनन् । सन्तझँै लाग्ने यी जगत्कै स्वामीहरु हुन् । यिनीहरुलाई संसारै घर र विश्वका मानिसहरु परिवारका सदस्यहरु जस्तै लाग्छन् ।
म यतिखेर आदरणीय महामानव तथा संसारकै उच्चतम् त्यागी राजनेता नेल्सन मन्डेलालाई परमार्थीमा राख्न खोजिरहेको छु । हुन त, यो मेरो धृष्टता पनि हुन सक्छ । कोही कसैले भन्ला– मन्डेला परार्थी मात्र हुन् । हो, छनोट र मूल्याङ्कन आ–आफ्नो हुन्छ । त्यसमा कसैले कसैलाई लगाम र पाबन्दी पनि लगाउनु हुँदैन । मन्डेलाका व्यवहार र विचार साथै उनको पुस्तकबाट पनि हामी उनलाई परमार्थीपन भएका राजनेतामा राख्न सक्छौँ । जातीयताको राजनीतिक गन्ध मडारिन लागेको गरिब हाम्रो देश नेपालमा उनले जातका बारेमा भनेका कुराबाट पनि शिक्षा लिन सकिन्छ । ‘क्षमादान’ उनको अर्को महान् व्यवहार हो । उनले दिएको क्षमादानलाई स्वीकारेर गोरा सरकारका पूर्वराष्ट्रपति एफ डब्लु डे क्लार्क मन्डेला नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिमण्डलमा खुसीसाथ उपराष्ट्रपति बस्न राजी भएका थिए । नेपालमा अतिवादीहरुलाई मिलाउने र संविधान बन्ने सन्दर्भमा के अहिलेका राष्ट्रपति रामवरण यादब परिआइलाग्यो भने यतिखेर आफू नयाँ बन्ने जोकोहीको पनि सहमतिले उपराष्ट्रपति बन्न सक्छन् त ? यो जनताको प्रश्न हो ।
उत्तर सजिलै दिन सकिन्छ, सक्दैनन् । किनकि, रामवरण त्याग गरेर मन्डेलाको समकक्षमा पुग्ने हैसियत राख्दैनन् र नेपालमा त्यस्तो उच्च राजनीतिक संस्कारको विकास भैसकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा पनि हामी एकफेर मन्डेलालाई स्मरण गर्दै के भन्न सक्छौँ भने ईश्वरीय शक्ति वा प्रकृतिप्रदत्त ऊर्जाले दिन र चाहन सक्छ भने एकपटक नेपालजस्तो उदीयमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्कार क्रमशः हुर्कंदै गरेको देशमा मन्डेलाजस्ता महामानवको सशरीर जन्म हुनुपर्छ । नितान्त कोरा कल्पना नै सही, यो समयको माग हो । अब नेपालमा पनि त्यागको राजनीति सुरू हुनुपर्छ । यसको सुरूवात वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति रामवरण यादबबाटै सुरू हुनुपर्छ । यदि यसो भयो भने निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वीकारेर अहिले आफ्नो साइज सानो भएकामा निर्वाचनमा सरकारले नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत धाँधली गरेको भनिरहेको एनेकपा माओवादी र निर्वाचन प्रक्रियालाई नै चार दलीय सिन्डिकेट भनेर ३२ दलसहित बाहिर बसेको वैद्य माओवादीको पनि चित्त बुझाउन सकिन्छ ।
मन्डेला भन्थे– ‘तपाईं शत्रुबाट शान्ति चाहनुहुन्छ भने ऊसितै सहकार्य गर्नुहोस् ।’
यदि यस्तो हुन सक्यो भने गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भएर ऐतिहासिक छवि बनाएका यादव अमर रहेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका त्यागमय छवि बनाएका राष्ट्रपतिसमेत हुन सक्छन् । यसमा कांग्रेसले हाम्रा राष्ट्रपति भनेर छेकथुन गर्ने स्थिति पनि आउँदैन । आखिर, उनले आफू राष्ट्रपति भएपछि कांग्रेसको सामान्य सदस्यताबाट समेत राजीनामा दिइसकेका हुन् । हो, यही र यस्तै माहोलमा मानिसले अजरामर बन्ने छलाङ हान्ने हो । यदि त्यस्तो भयो भने रामवरण साँच्चै मिथिलाका राजा जनकका धार्मिक ज्वाइँ आदर्श राघव रामचन्द्रझैँ आदर्शका पुञ्ज हुन सक्छन् । उनी आफूलाई जानकीनन्दन क्षेत्रका गाउँले किसानका छोराका रुपमा लिन जो चाहन्छन् । उनी पनि नश्वर शरीर लिएर आएका छन्, जो एक दिन जानैपर्छ । उनले त्यस्तो निर्णय लिए भने आफ्नो राजनीतिक पल्ला भारी भैरहन कामयाबी भूमिका खेलिदिने राष्ट्रपतिले अलोकप्रिय निर्णय लिए भनेर केही दिन कांग्रेस रिसाउन सक्छ । त्यो भनेको चाराना घाटा हुने आवस्थिक तर्क हो । तर, बाराना त देशलाई फाइदा नै हुन्छ । अनि, अहिलेका राष्ट्रपति कांग्रेसको टिकटबाट चुनिएका कांग्रेसका मात्र हुन् भन्ने आमभ्रम समेत चिर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । यो अवस्थाको ख्याल गरी उचित कदम चालेमा रामवरण यादवको राजनीति नेपाली आगत पुस्ताले युगौँयुगसम्म दिल खोलेर सम्झिरहने छन् ।
समयको सुई अनवरत घुमिरहन्छ । कसैले चाहोस् या नचाहोस्, समय आफ्नो गतिमा अनवरत यात्रा गरिरहन्छ । यो सभ्यता निर्माता हो भने वर्तमानको पहरेदार समेत हो । अवसर यो पटक नेपालका राष्ट्रपतिलाई घुमीफिरी आएको छ । जीवनमा यस्ता अवसरहरु मानिसलाई पटकपटक आउँदैनन् । जसले समयको माग र पदचापलाई बुझ्दछ, त्यो मानिस नै संसारमा अमर र अजर रहिरहन सक्छ ।
‘सफल मानिस नयाँ कुरा गर्दैनन्, तर त्यही कुरा फरक ढंगले गर्छन्’ भनेझैँ यस दृष्टिले पनि सफल व्यक्ति र देशलाई मापन गर्न सकिन्छ । संसारमा सानो हुन सक्ने र चाहने मानिस नै अन्ततोगत्वा असल र ठूलो बनेको छ । मन्डेलाको चरित्र पनि ठूलो हुने होइन, असल बन्ने हो ।
यो भनाइलाई हाम्रा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा नेपालको राष्ट्रप्रमुखका रुपमा विराजमान रामवरण यादवले अङ्गीकार गर्ने हो भने जनमानसमा सकारात्मक सन्देश जाने थियो । तर, त्यो देखिने छाँट अहिलेसम्म देखिएको छैन । नेपालका सबैखाले सरकारबाट या प्रथम राष्ट्रपतिबाट कुनै चामत्कारिक खालको कार्य न भएको र न हुने सम्भावना पनि छ । यो देशमा खै के, खै के ? राम्रो काम हुन पनि नदिने र राम्रा मानिसलाई पनि काम गर्न नदिने संस्कार छ । कहिलेसम्म यस्तो संस्कारको अन्त्य हुँदैन ? सबैमा चेतना भया !